Ixabiso eliphantsi lomgangatho ophezulu we-Industrial Cyclone Powder Collector Suppliers kunye neFektri | YiZheng
Yintoni iNkanyamba yokuqokelela uthuli?
Inkanyamba yokuqokelela uthuli luhlobo lwesixhobo sokususa uthuli. Umqokeleli wothuli unamandla aphezulu okuqokelela eluthulini ngomxhuzulane othile kunye namasuntswana atyebileyo. Ngokokuxinana kothuli, ukutyeba kweengqokelela zothuli kunokusetyenziswa njengokususa uthuli oluphambili okanye ukususwa kothuli kwinqanaba elinye ngokwahlukeneyo, kwirhasi equlathe uthuli kunye negesi enobushushu obuphezulu, inokuqokelelwa iphinde iphinde isetyenziswe.
Icandelo ngalinye lomqokeleli wothuli lwenkanyamba linomlinganiso othile wesayizi. Naluphi na utshintsho kulo mlinganiso lunokuchaphazela ukusebenza kakuhle kunye nelahleko yoxinzelelo lomqokeleli wothuli lwenkanyamba. Ubukhulu beqokeleli uthuli, ubungakanani bendawo yokungena komoya kunye nobubanzi bombhobho wokukhupha zezona zinto ziphambili. Ukongeza, ezinye izinto ziluncedo ekuphuculeni ukusebenza kokususa uthuli, kodwa ziya kunyusa ukulahleka koxinzelelo, ke ulungelelwaniso lwento nganye kufuneka luqwalaselwe.
Yintoni iNkanyamba yokuPhuma kothuli yokuSebenzisa esetyenziselwa used
Eyethu Inkanyamba yokuqokelela uthuli Isetyenziswa ngokubanzi kwizinyithi, ukulahla, izinto zokwakha, ishishini lamachiza, iinkozo, isamente, ipetroleum, ishishini lokukhanya kunye namanye amashishini. Ingasetyenziswa njengezixhobo ezisetyenziswayo ukuphinda zincedise ukomisa uthuli olungenamicu kunye nokususwa kothuli.
Iimpawu zoMqokeleli wothuli lwenkanyamba
Akukho zinto zihambayo ngaphakathi komqokeleli wothuli lwenkanyamba. Ulondolozo lula.
2. Xa ujongana nomthamo omkhulu womoya, kulunge ukuba iiyunithi ezininzi zisetyenziswe ngokuhambelana, kwaye ukuxhathisa kokusebenza akusayi kuchaphazeleka.
3. Isixhobo sokwahlula uthuli isixhobo sentsimbi sokukhupha uthuli sinokumelana nobushushu obuphezulu be-600 ℃. Ukuba kusetyenziswa izinto ezikhethekileyo zokunyanga ubushushu obuphezulu, inokumelana nobushushu obuphezulu.
4. Emva kokuba umqokeleli wothuli exhotyiswe ngemigca yokunxiba enganyangekiyo, inokusetyenziselwa ukucoca ulwelo lwamanzi oluqulathe uthuli oluphezulu.
5. Kukulungele ukwenza ntsha kwakhona uthuli oluxabisekileyo.
UkuSebenza okuzinzileyo kunye nokuGcinwa
Inkqubo ye- Inkanyamba yokuqokelela uthuli ilula kubume, kulula ukwenza, ukufaka, ukugcina nokulawula.
(1) Iiparamitha ezizinzileyo zokusebenza
Iiparameter ezisebenzayo zomqokeleli wenkanyamba ikakhulu zibandakanya: isithuba somoya esinyukayo somqokeleli wothuli, ubushushu begesi egqityiweyo kunye nokuxinana kobuninzi begesi equlathe uthuli.
(2) Thintela ukuvuza komoya
Nje ukuba ukuqokelela uthuli lwenkanyamba kuvuze, iyakuchaphazela kakubi ukususwa kothuli. Ngokutsho koqikelelo, ukusebenza kothuli lokususa kuya kuncipha nge-5% xa ukuvuza komoya kwikona engezantsi yomqokeleli wothuli yi-1%; ukusebenza kothuli lokususa kuya kuncipha nge-30% xa ukuvuza komoya kuyi-5%.
(3) Thintela ukunxiba kweendawo eziphambili
Izinto ezichaphazela ukunxiba kwamalungu aphambili zibandakanya umthwalo, isantya somoya, amasuntswana othuli, kunye nezinto ezigugileyo kubandakanya iqokobhe, ikhowuni kunye nendawo yothuli.
(4) Kuphephe ukuvaleka kothuli kunye nokufumba kothuli
Ukuxinana nothuli kokuqokelela uthuli lwenkanyamba kwenzeka ikakhulu kufutshane nothuli, kwaye okwesibini kwenzeka kwimibhobho yokungena kunye neyokukhupha.
Inkanyamba Powder Uthuli Umqokeleli Umboniso weVidiyo
Ukukhethwa kweModeli yoQokelelo loThuli lweMpuphu
Siza kuyila i Inkanyamba yokuqokelela uthuli Ukubalula okufanelekileyo kuwe ngokwemodeli yomatshini wokumisa isichumisi kunye neemeko zokusebenza.
Egqithileyo Ubushushu obuPhezulu beMizi-mveliso obukwenziweyo beFrafti yokuYila
Okulandelayo: Isitshisi samalahle esityunjiweyo
Intshayelelo Yintoni iRotary Drum Compound Fertilizer Granulator Machine? Isichumisi seGubu seCompound Fertilizer Granulator sesinye sezixhobo eziphambili kwishishini lesichumiso esimbaxa. Eyona ndlela iphambili yokusebenza kukupela ngegranulation emanzi. Ngomlinganiselo othile wamanzi okanye umphunga, isichumiso esisisiseko senziwe ngokupheleleyo ngemichiza kwi-cyli ...